သာကီဝင်နှင့် မျိုးဖျောက်ချင်သူများ “အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်တော်မူရင် ပေါက်ဖော်သာယူ” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« “ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ သမိုင်းတစွန်းတစ နဲ့ လူမျိုးများ ဝင်ရောက် အခြေချနေထိုင်ပုံ”
Hot News ဂျာနယ် ဆောင်ပါးရှင် နိုင်ထက်ရှိန်(ဟင်္သာတ)သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ »
“မြန်မာ့အားကစားကမ္ဘာကိုလွှမ်းစေရမည်” ဆိုပြီး လုပ်တော့ ထောင်ထဲမှာ ကိုညွန့်ဇော်က
“ဘာလဲ.. ထုတ်ဆီးတိုးနဲ့ကြက်ဖခွပ်တမ်းလား” ဟု လှမ်းထေ့ဖူး၏။
“အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်ပါသည်” ဆိုတုန်း ကလည်း အပြင်ကသူငယ် ချင်းတယောက်က
“ကြောက်တော်မူရင် ပေါက်ဖော်သာယူလေ..မမညွန့်” ဆိုပြီး အငေါ်တူးဖူး၏။
ဗမာ့တပ်မတော်တွင် စစ်ဗိုလ်စစ်သားများ နိုင်ငံခြားသူ နှင့် ယူလို့မဖြစ်။ မယူရဟု မပြော။ ယူလို့ မရအောင် လုပ်ထား၏။ တိုင်းခြားသူ ကိုယူဖို့ မဆိုနှင့် တပြည်ထဲ နေ လူမျိုးစုတွေ ထဲက ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်သည့် စစ်ဗိုလ်များ စစ်ဘက်ရာထူးကြီးကြီး ကို မျှော်လင့်လို့မရတော့ သည်မှာ ကြာပြီ။ ထို့ကြောင့် စစ်ဗိုလ်တချို့ အာဏာ နှင့် ဘာသာလဲ ကြသည်လည်း ရှိ၏။ ဘာမှပြောစရာမရှိ။ သူတို့ကိစ္စ။ သာသနာပြုမင်း လို့ကြွေးကြော်၊ ခံယူ၊ အပြလည်း လုပ်သည့် ထိပ်သီးတွေ က ၂၀၀၇ တွင် ရတနာသုံးပါးမှတပါး လမ်းပေါ်ထွက်လာပြီး မေတ္တာပို့ရင်း သူတို့ကို ဆင်းခိုင်း၏။ ဒါကို “တိုက်ရိုက်အာဏာခြိမ်းခြောက်မှု” အဖြစ်ယူပြီး “အာဏာနှင့်သံသရာ” လဲလိုက်၏။ သည်တော့ အောက်က လူတွေ “အာဏာ နှင့် ဘာသာ” လဲခြင်း အား နားလည်ရ ပိုလွယ်သွား၏။ ထိုသူတို့နှုတ်ထွက် အမျိုးပျောက် မှာ စိုးကြောက်ခြင်းကို လည်း ပိုထင်ရှားလာစေသည်ဟု ယူဆမိ၏။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတို့သည် ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယ ပြီးစေကာ မူ လောကတ္ထစရိယ နှင့် ဉာတ္ထစရိယ ကိုလည်း ကျင့်တော် မူရမြဲဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပြီး ရောဟဏီမြစ်ရေကိစ္စအပေါ် ကပိလဝတ် နှင့် ကောလိယ မှသာကီဝင် တို့အချင်းချင်း စစ်ခင်းကြတော့မည့် ဆဲဆဲအခြေအနေ ၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ က ရန်ငြိမ်းကြောင်း တရားဟောပြီး စစ်ပွဲကို စဲစေ တော်မူကြောင်း ကို အသေးစိတ် ရေးထား၏။ ထို့နောက် သာကီဝင်တို ၏အမျိုးမာန်ကြီးမှု ကို – (သာကီဝင်တို့ သည် အမျိုးမာန်ကြီး၏။ မိမိတို့အမျိုးထဲ မှာ အခြားအမျိုးရော မှာ ကိုလက်မခံ။ အမျိုးမစပ် မြတ်သော မင်းမျိုး …အသမ္ဘိန္နခတ္တိယ ဟူသော ဂုဏ်ကို ထိန်းကြသည်။ ထို့ကြောင့် လည်း ဗုဒ္ဓနှင့် အမျိုးစပ် ချင်သော ကောသလမင်းက သာကီဝင်မင်းသမီးတပါးပေးပါ ဟု တောင်းလာသော အခါ အမျိုးချင်းမတူသည့် အတွက် မဟာနာမသာကီဝင် နှင့် ကျွန်မက မွေးသော ဝါသဘခတ္တိယာ ကို သာကီဝင်မင်းသမီး လုပ်၍ ပေးလိုက်ပါသည် ။ ဤ ဝါသဘခတ္တိယာ မှာ ဝိဋဋ္နူဘ ကို ဖွားပါသည်။ ဝိဋဋ္နူဘ အရွယ်ရောက်သော အခါ သာကီဝင် အဘိုးအဘွားတို့ ထံ အလည်သွားသည်။ သူ့ကို ကန်တော့ မည့်သူ တဦးမျှမရှိ။ သူကသာ သာကီဝင်တို့ကို ကန်တော့ ခဲ့ ရသည်။ သာဝတ္ထိသို့ အပြန် တွင် သူထိုင်သွားရာ နေရာကို“ကျွန်မသား ထိုင်သွားသောနေရာ” ဟု ကျွန်မ တယောက်က နို့ရည်နှင့် ဆေးနေသည်ကို အကြောင်း အားလျော် စွာ သိလိုက်ရသည်။ ဤတွင် သာကီဝင် တို့၏ သွေးဖြင့် သူထိုင်သောနေရာ ကို ဆေးမည် ဟု ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တော့ သည်။
ထို့ကြောင့် သူမင်းဖြစ်သော အခါ သာကီဝင်တို့ ကို သတ်အံ့ ဟု ကပိလဝတ်ပြည် သို့ စစ်ချီလေတော့ သည်။ ဗုဒ္ဓလည်း ကပိလဝတ်သာကီဝင်တို့ ကို ကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ ကပိလဝတ်ပြည်တော် သို့ ကြွတော်မူ ၍ ကပိလဝတ်ပြည်အနီးအရိပ် ကျဲသောသစ်ပင်အောက်၌ ထိုင်နေတော်မူ၏။ ထိုအပင်နှင့်မနီးမဝေးသောအရပ် ဝိဋဋ္နူဘ၏နယ်စပ်၌ အရိပ်ကောင်း သော ညောင်ပင်တပင် ရှိ၏။ ဝိဋဋ္နူဘ သည် ဗုဒ္ဓကိုမြင်လျှင် လာရောက် ၍ ရိုသေမြတ်နိုးရှိခိုးပူဇော်ပြီး -“အရှင်ဘုရား အဘယ်ကြောင့် ဤအရပ်သို့ ကြွလာတော် မူပါသနည်း ။ တပည့်တော်၏ နယ်စပ် ၌ အရိပ်ကောင်းသော ညောင်ပင်ရှိပါသည်။ ထိုညောင်ပင်အောက် ၌ ထိုင်တော်မူပါ” ဟုလျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓက “ရှိပါစေ မဟာရာဇ ..ဆွေမျိုးတို့၏ အရိပ်မည်သည် ကား အေးမြလှပါ၏။” ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ဝိဋဋ္နူဘက “ဆွေမျိုးတို့ကိုစောင့်ရှောက် ရန် ဗုဒ္ဓကြွလာတော်မူခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်” ဟုသိ၍ ဗုဒ္ဓကို ရိုသေစွာရှိခိုးပြီး မိမိ၏စစ်တပ်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားလေ၏။
ရှိတ်ကားစ်များ အကြောင်း ကိုပြောမည် ဆိုလျှင် ဓမ္မသစ်ကျမ်း “တမန်တော်ဝတ္ထု″ အခန်းကြီး၂၊ အခန်းငယ် ၃-၄ မှစရမည်ထင်၏။
သို့ဖြင့် ဝိဉာဉ်၏စင်ကြယ်ရာကို ရှာရင်း ဝေါ့ဒ်လေးစ်ဇနီးမောင်နှံ နှင့် ၁၇၈၅ တွင်ချိတ်မိ၏။ ဤတွင် ရှိတ်ကားစ်အယူအဆ သန္ဓေတည်မိ၏။ ဝေါ့ဒ်လေးတို့က “လိင်မှုရှောင်ခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံသော မြင့်မြတ်စင်ကြယ်မှု ကိုရ၏” ထို့ပြင် “ဓါတ်စီးပြီးတကိုယ်လုံးယိမ်းထိုးလာရခြင်း သည် လူတို့အား သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရန် အလို့ငှာ ဆေးကြောတော်မူသော ဘုရားသ္ခင် ဝိဉာဉ်တော် စွမ်း ကြောင့်” ဟု ဆို၏။ ဝိဉာဉ်တော် ပူးဝင်ပြီး ထိုသို့ Shaking ဖြစ်လာသူ တို့ Shakers များဟု ခေါ်၏။ အမေရိကားတွင် သူတို့ကို တရားဝင်သုံးသည့် အမည်ကွဲတွေ လည်းရှိသေး၏။ သူတို့ကျင့်စဉ် က လိင်မှုရှောင်၊ တန်းတူလုပ်၊ တန်းတူစား၊ ဘုံပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်နေ၊ ဝိဉာဉ်ဓါတ်စီးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို စင်ကြယ်စေရေး။ ဤတွင် ကျောင်းတော် Church of England နှင့် ရန်စပေါ်ပြီး၊ သူ ထောင်ထဲရောက်သွား၏။ ထောင်ထဲတွင် “လိင်ကိစ္စသည် ဒုစရိုက်မှုအပေါင်း ၏ သရဖူဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ထိုကိစ္စ ကို ပြင်းစွာ ရှောင်ရမည်။ ခရစ်တော် ဒုတိယ အကြိမ်ပြန်ကြွတော်မူချိန် အတွက် ပြင်ဆင်ဘွယ်ရာ တို့ကို သူ့အနေ ဖြင့်ပြုရမည်။ လောကသစ်ကိုဆောင်ကျဉ်းဖို့ရာ အသင်၏ ဝတ္တရားဖြစ် ၏” စသည်ဖြင့် ဗျာဒိတ်များ ထောင်ထဲတွင်မြင်ခဲ့ရ၏။ သည်လို နှင့် ၁၇၇၄ ရောက်တော့ အန်းလီးနှင့်နောက်ပါ ၈ ဦးသား အမေရိကားသို့ ပေါက်ချလာ၏။ အချိန်က အမေရိကန် တို့ တော်လှန်ရေးစိတ် ထိပ်တက်နေစဉ် ကာလ။ စစ်နဲ့ဝေးဝေး အေးရာအေးကြောင်း နေခြင်း နှင့် ယင်းတို့၏ကျင့်စဉ်ကြောင့် အရိုက်အနှက်၊ အနှိပ်အစက်၊ အဖမ်းအဆီး နှင့် ထောင်အချတွေပါ ခံရ၏။ ၁၇၇၄ တွင် အမေရိကား၌ ထို ၈ ဦးမှစခဲ့သည့် အယူဝါဒသည် ၁၈၂ဝ လောက် ရောက်တော့ နူးအင်္ဂလန်၊ အိုဟိုင်းယိုး နှင့်ကင်တပ်ကီ တို့တွင် သက်ဝင်သူ ၂ သောင်းကျော် ဖြင့် ရွာပေါင်း ၁၉ ရွာ အထိ တည်မိလာ၏။ ၁၈ဝ၅ တွင် ကင်တပ်ကီပြည်နယ် မာဆာခရိုင် မောင့်ပလဲဆင်န့်အရပ် ၌ မြေဧက ၇ဝဝဝ ထောင်ကျယ်၊ ရှိတ်ကားစ် ၅ဝဝ ဖြင့် ရွာတရွာ ၊ ၁၈ဝ၇ ခုတွင် လိုဂန်ခရိုင် ၌ မြေဧက ၆ဝဝဝ ကျယ်၊ ရှိတ်ကားစ် ၃၄၉ ဦးဖြင့်တရွာ ၂ ရွာတည်မိ၏။ ရှိတ်ကားစ်တို့ ၏ နိစ္စဓူဝပြုကျင့်ဖွယ်တွင် ဝိဉာဉ်တော် ၏ လှုပ်အနှိုး ကိုစောင့်ရင်း တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ တရားမှတ်ခြင်း၊ ဝိဉာဉ်တော်ဝင်ပူးပြီး ဓါတ်စီးမိလျှင် အုပ်စုလိုက် ဝိုင်းပတ်ကခုန်သီဆိုခြင်း၊ ဘာသာစကား အမျိုးဖြင့် ပြောခြင်း၊ ရှေ့ဖြစ်နောက်ဖြစ် ဟောကိန်း ထုတ်ခြင်း၊ ရောဂါဝေဒနာများ ဘုရားကု ကုခြင်း၊ တန်ခိုးပြာဋိဟာပြခြင်း၊ စိတ်၏စင်ကြယ်ရာ၌ဈန်ဝင်စားခြင်း၊ တခါတရံတွင် ဗျာဒိတ်ရူပါရုံတို့ အား အတူတကွ ရှူမြင်ကြခြင်းတို့ လည်းပါ၏။
သူတို့မရှိတော့သည့်နောက် နေသူမဲ့ပြင်သူမဲ့ အဆောက်အဦးတွေ ယိုယွင်းလိုက်လာ၏။ ပိုက်ဆံရှိသူ တွေကထိုမြေနေရာတွေ ကိုဝယ်ပြီး အဆောက်အဦးတချို့ကို စက်မှု ဇာတ်သွင်း ကာ ကားဝပ်ရှော့ တွေဖြစ်လာ၏။ ၁၉၆၁ ခုရောက်တော့ အစိုးရက “ဤနေသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ သမိုင်းဝင်နေရာဖြစ်၏” ဟုသတ်မှတ်ကာ ပြုပြင်ထိမ်းသိန်း စောင့်ရှောက်တာတွေစလုပ်၏။ ကျနော်ရောက်တော့ မူလအဆောက်အဦး ၄ဝဝ ကျော်အနက်က ၄ဝ ခန့်သာအကောင်းပကတိ ထိန်းထားသည်ကိုတွေ့ရ၏။ ထိုအထဲတွင် နဂိုရှိသည့် ရွာထဲက စားသောက်ဆိုင်၊ သိုးမွှေးညှပ်ရုံ၊ စိုက်ခင်းစိုက်ကွက်တချို့၊ ဘုံသုံးအဝတ်လျှော်စက်၊ အခြောက်ခံစက်နှင့်မီးပူတိုက်ရာနေရာ၊ မြင်းဆွဲဆီကြိတ်ဆုံ၊ စုပေါင်းဝတ်ပြုရာ ဘုံဘုရားကျောင်းကြီး၊ စုပေါင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်ရာဘုံရိပ်သာ၊ အမျိုးသမီးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်၊ အမျိုးသားပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်၊ အမျိုးသားအိပ်ဆောင်၊ အမျိုးသမီအိပ်ဆောင်များ၊ ကလေးအိပ်ဆောင်များ၊ အိမ်တွင်းမှုပစ္စည်းများထုတ်သည့်အလုပ်ရုံ၊ ရွာ့နောက်ခြမ်း စုပေါင်းအိမ်ယာကြီးများ၊ သုဓမ္မာဇရပ်ကြီးများ၊ စုပေါင်းစားဖိုကြီးများ၊ စုပေါင်းစားသောက်ခန်းကြီးများ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ မြင်းတင်းကုပ်များ၊ ကျောက်မီးသွေး သုံးသံရည်ကျိုဖိုများ စသည်ဖြင့်အတော်တော်များတွေ့ရ၏။ ရှိတ်ကားစ်တွေလိုဝတ်ထားသည့် ဧည့်လမ်းညွှန်တွေက လိုက်ရှင်းပြသရုပ်ဆောင်ပြကြ၏။ ပြန်ခါနီးတော့ ရွာထိမ်းသိန်းရေးတာဝန်ရှိသူတဦးက “လာရတာနှစ်သက်ပါသလား”ဟုမေးတော့ ကျနော်က နှစ်သက် ကြောင်း ပြောပြီး စိတ်ဝင်စားဘွယ် ဘဝနေနည်းတခုဟုထင်ကြောင်း” ပြန်ဖြေခဲ့၏။
This entry was posted on October 6, 2012 at 4:43 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.